America Inoti Vanhu Vakasungirwa Mhirizhonga paCapitol Hill Vanogona Kupomerwa Mhosva Yekuda Kukudubura Hurumende
Bazi rezvemitemo muAmerica rinoti humbowo hwariri kuwana pamusoro pemhirizhonga yakatora nzvimbo paCapitol Hill, muWashington D.C. musi wa 6 Ndira, hunoratidza kuti vamwe vevanhu vakasungirwa nyaya iyi vanogona kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga nechinangwa chekubvisa pachigaro hurumende yakasarudzwa zviri pamutemo.
Musi uyu, mhomho yevatsigiri vevaimbove mutungamiri wenyika, VaDonald Trump, vakapinda zvechisimba muparamende yeAmerica, yeCapitol Hill, vakapunza zvinhu, kusanganisa mahwindo, misuwo, macheya, matafura nezvimwe vachitsvaga vanhu vavaiti vakabatsira mukubira sarudzo yemutungamiri wenyika.
Mhirizhonga iyi yakakonzera kufa kwevanhu vatanhatu.
Bazi rinoona nezvemitemo rinoti rakatopomera mhosva vanhu vanopfuura mazana mana vavanoti vangangotongwa nemhosva yekuda kubvisa hurumende pachigaro zvechisimba vachishandisa zvombo, kana kuti ‘sedition’.
Muchuchisi wehurumende, VaMichael Sherwin, vanoti humbowo huripo hunotsigira kupomera vanhu ava nemhosva iyi, vachiti mukufamba kwenguva humwe humbowo hucharatidza kuti izvi ndizvo zvaida kuitwa nevanhu ava.
Asi vanoongorora zvematongerwo enyika, VaCalvin Manduna, vanoti mu America hazvisi nyore kupomera munhu mhosva yekuda kubvisa hurumende pachigaro nechisimba.